छिमेकी मुलुकसँग सरकारले सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्छ: महासचिब पोखरेल
22 Dec 2015 | 17:40pm
इटहरी–नेकपा एमालेका महासचिब इश्वर पोखरेलले छिमेकी देशहरुसँग असन्तुलन कायम गरेकै कारण मुलुकमा अहिलेको असहज परिस्थिति सृजना भएकाले अब भने सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले नेपालकै कमजोरीले अहिलेको असहज परिस्थिति बेर्होरेको बताउँदै चीनसँग चाडैं नै सम्झौता हुने बताए । 'अहिले सरकारले गर्ने भनेको दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ,' महासचिब पोखरेलले मंगलबार इटहरीमा प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'चीन वा भारतको बिरोध होइन् । छिमेकीसँग मिलेर बस्न सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्छ।' उनले चिनसँगै चाडैैं सम्झौता भएपछि दुवै देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए।
'अहिलेसम्म एउटा छिमेकीसँग बाह्रै महिना जताबाट पसेपनि हुने गरी व्यवहार ग¥यौं, अर्को छिमेकीसँग जोडिएको बाटो पनि छैन् । दोष कसलाई दिने ?' उनले भने, 'यदि बाह्रै महिना चीनसँग दुई–चारवटा नाका खुल्ला हुन्थे भने अहिलेको स्थिति आउने थिएन् ।' पोखरेलले छिमेकीसँग जुक्ति–बुद्धि निकालेर व्यवहार गर्नुपर्ने बताए।
'सबैथोक बदल्न सकिन्छ, छिमेकी बदल्न सकिदैन् । इन्डियाले ज्यादै पेल्यो भनेर गाली गर्दा इन्डिया अन्यत्र जादैंन् । चीनले टेरेन भनेर गाली गर्दा चीन अन्यत्र जादैन,' उनले भने, 'दुईवटा ठूला मुलुकले ज्यादै पेले भनेर नेपाल अन्यत्र बसाई जान सक्दैन् । जुक्ति बुद्धि निकालेर सास फेर्न सिक्नुप¥र्यो ।' उनले भारतसँग सन् १९५० मा गरिएका सन्धी–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको तर्क गरे ।
'मनमोहन अधिकारी ०५१ सालमा प्रधानमन्त्री हुदाँ भारत भ्रमण गर्न जानुपूर्व सन् १९५० सन्धी–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने कुरा गर्दा धेरै मान्छे आतिएका थिए,' आफू त्यो बेला अधिकारीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहाकार भएको सम्झदै पोखरेलले भने, 'हिजो अर्कै युगमा भएको सम्झौता भारतमा पनि धेरै चीज बदलियो, नेपालमा पनि बद्लियो । अद्यवधिक गर्नुपपर्ने बेला भएको छ ।' उनले अहिलेसम्म भारतसँग गरेका सन्धी–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गृहकार्य नभएकाले गर्दा पनि अप्ठ्यारो परेको स्पस्ट पारे ।
नेता पोखरेलले भारतले गरेको नाकाबन्दीको संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, बेलायतलगायतका देशसँग कुरा उठाइ सकेको बताए ।
उनले नेपालको संविधान उन्नत किसिमको लोकतान्त्रिक संविधान भएको जिकिर गरे । 'सन् १९५० मा भारतमा संविधान जारी भयो । जसको संयोजक डा. अम्बेडक्कर जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र त्यसबेला पोलिटक्कली टावर पर्सनलिटी भएका जवारलाल नेहरुले आफ्नो तर्फबाट ८० जना मान्छे मनोनित गरेर बनाएको संविधानसभामा ६७ प्रतिशत समर्थन थियो, अमेरिकाको संविधानमा ५२ प्रतिशतको समर्थन थियो तर नेपालमा ९१ प्रतिशतभन्दा ज्यादाको समर्थन छ,' उनले भने ।